China Bakeware ne nomabi SKU NO.2640-2642 Manufacturers kunye Suppliers | SJZ JINXUAN
Ezingaqhelekanga Kitchen-to-Table nsimbi Bake, nimkhonze, ivenkile, kwaye kufudumeze bonke bakeware efanayo. Izitya iglasi yokubhaka kwenza kube lula ukuba upheke ngaphambi kwexesha ze ukugcine efrijini okanye kwisikhenkcezisi ukuze kamva. Best zonke, i uhambo kakuhle ukusuka eziko nawuphi itheyibhile sentlalo kuba kukulungiselela bendawo bakeware, kunye eseleyo ungabuyela kanye emva efrijini ekupheleni ebusuku-akukho mfuneko yokuba izitya ezimdaka ezininzi. Nceda Qaphela: MUSA ukuhambisa iglasi bakeware ngqo freezer ukuba eziko. Vumela ...
Ukubhaka, nimkhonze, ivenkile, kwaye kufudumeze bonke bakeware efanayo. Izitya iglasi yokubhaka kwenza kube lula ukuba upheke ngaphambi kwexesha ze ukugcine efrijini okanye kwisikhenkcezisi ukuze kamva. Best zonke, i uhambo kakuhle ukusuka eziko nawuphi itheyibhile sentlalo kuba kukulungiselela bendawo bakeware, kunye eseleyo ungabuyela kanye emva efrijini ekupheleni ebusuku-akukho mfuneko yokuba izitya ezimdaka ezininzi.
Nceda Qaphela: MUSA ukuhambisa iglasi bakeware ngqo freezer ukuba eziko. Vumela nobudlelwane ukudla phambi kokuba ekuphekeni okanye ayaphola eziko. Qiniseka ukusebenzisa i potholder xa uphethe izitya iglasi bakeware eshushu.
Izitya iglasi yokubhaka zingasetyenziswa ukubhaka okanye kufudumeze ukutya eontini eqhelekileyo okanye oven. Bona amacala iglasi nge kuvumela kwamandla ayokufikelela kwi inkqubela kutya xa ukubhaka, ngokubonelela ulawulo wongezelela phezu iziphumo zokugqibela.
Ezi bakeware zenziwa ngeglasi-ilungele borosilicate ukuba ukwandiswa thermal kwaye ngoko ngaphantsi agule laqhekeza xa baboniswa utshintsho obushushu.
Nceda Qaphela: Glass bakeware akunakusetyenziswa phantsi pfumerile, phezu stovetop, okanye utywala okanye Izitofu ubushushu enkonkxiweyo njengomthombo ubushushu ngqo.
Ezi Bakeware ne nomabi unako ukusahlula ukutya effeciently, siyayiphepha bangcoliswa kwezinye amavumba, ngoko unako ukutya entsha yokuqala.
Previous: Bakeware in Ukuma Square
Next: Casserole in seqanda SKU NO.277-278-279-2710-2711
Bakeware kwimilo okoxande SKU NO.2614D
Bakeware in seqanda kunye Handle SKU NO.226H -...
Bakeware kwimilo lume nge Handle SKU NO.261 ...
Bakeware in seqanda kunye Singatha SKU NO.226-269
Bakeware in Ukuma Square
Bakeware in Ukuma Round
Glass Cups With Silicone Sleeve, Borosilicate Glass Bottle With Silicon Sleeve, Borosilicate Glass Iviniga & Oli Bottle, Borosilicate Glass Bottle With Bamboo Lid, Glass Bottle With Colorful Silicon Coating, Borosilicate Glass Bottle,